Ezemithi - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
I-Gelatin capsules engenalutho, isetshenziselwa ukugcina ezinye izidakamizwa eziqinile, kanye nezidakamizwa eziwuketshezi, njengemikhiqizo yezempilo noma imithi yokwelapha, ukuze kuthuthukiswe inkinga yokudla okunzima nokunambitheka okungalungile lapho uthatha, futhi ayinayo imiphumela emibi umzimba. Kuyinto ephephe kakhulu. Ukusetshenziswa kwe-gelatin capsule engenalutho ukuthi kuvame ukwenziwa amaphilisi amabili, elinye lawo livame ukugcwala izidakamizwa, njengezidakamizwa eziqinile noma izidakamizwa eziyimpuphu, bese kuthi elinye igobolondo lisethwe ngakolunye uhlangothi lomuthi, izidakamizwa ezigcwele i-gelatin capsule engenalutho zingenziwa ngqo kwinqubo elandelayo.
I-capsule ethambile iyindlela yokupakisha ye-capsule, evame ukusetshenziswa kwezokwelapha noma ekudleni kwezempilo. Luhlobo lwephilisi elenziwe ngokufaka uphawu kumuthi owuketshezi noma umuthi oqinile oketshezi ezintweni ezithambile ze-capsule. I-capsule material ethambile yenziwe nge-gelatin, i-glycerin noma ezinye izinto ezifanele zokwelapha.
OkweThebhulethi noma Ukwembiwa Kwamavithamini
Ukumbozwa kweGelatin kuvikela amavithamini ekukhanyeni noma oksijini. Futhi njengesiqinisi sethebhulethi